WARBIXIN: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Rekoodhka Lionel Messi Ee Uu 36-ka Kooxood Ee La Liga Uu Goolasha Kaga Dhaliyay. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Rekoodhka Lionel Messi Ee Uu 36-ka Kooxood Ee La Liga Uu Goolasha Kaga Dhaliyay.
Xidiga xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa sidii aanu idiin soo gudbinay kulankii Girona noqday xidiga abid kooxaha ugu badan ee horyaalka La Liga goolal kaga soo dhaliyay wuxuuna dhaafay halyaygii Real Madrid ee Raul iyo xidiga kooxda Atheltic Bilbao oo min 35 kooxood hore uga soo dhaliyay goolal horyaalka Spain ee La Liga ah isaga oo noqday xidigii ugu horeeyay ee 36 kooxood La Liga shabaqa kaga soo taabtay.
Waqti ayay u baahan tahay in markiiba la helo xog dhamaystiran oo arintan la xidhiidha, balse ugu danbayn shabakada Gool24.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa koox kasta oo uu Lionel Messi goolal kaga soo dhaliyay La Liga, tirada goolasha uu ka soo dhaliyay koox kasta, iyada oo aanu waliba xusi doono goolasha rekoodhayaasha iyo laaga xorta uu ku dhaliyay.
Kooxaha 36 ka ah ee Lionel Messi dhibanaha ugu soo noqday La Liga waxaa kaalinta kowaad kaga jirta kooxda Sevilla oo uu ka dhaliyay goolasha La Liga ee ugu badan isaga oo 23 gool ka soo dhaliyay inkasta oo uu 22 kulan ka hor yimid.
Kooxda Athletic Bilbao ayaa ah kooxda labaad ee uu Lionel Messi waqtiga badan soo dhibaateeyay isaga oo 23 kulan ka soo dhaliyay 22 gool halka kooxaha Osasuna iyo Valencia ay yihiin kooxaha ku sii xiga ee uu Messi min 21 gool kaga soo dhaliyay horyaalka la liga isaga oo waliba Osasuna 17 kulan 21 gool kaga soo dhaliyay.
Laakiin saddex kooxood oo kaliya oo waqtiyo koobanka soo muuqday horyaalka La Liga ayaa awooday in ay Lionel Messi shabaqa ka ilaashadaan oo ayna ka mid noqon 36 ka kooxood ee uu rekoodhka cusub ku dhigay waxayna kala yihiin kooxda Cadiz oo uu hal kulan ka hor yimid, Murcia oo uu laba kulan ka hor yimid iyo Xerez oo uu iyadana laba kulan oo uu ka hor yimid iska joojisay waxayna kulamadani ahaayeen waqtigii uu da’yarka ahaa.
Waxayna tani la micno tahay in 39 kooxood oo uu Messi kaga horyimid La Liga tan iyo kulankiisii ugu horeeyay in uu 36 ka mid ah goolal ka soo dhaliyay.Lionel Messi ayaa kooxahan 46 gool rekoodhayaal kaga soo dhaliyay goolashan halka 23 gool uu kubbado laaga xorta ah ku dhaliyay.
Haddaba Akhriste halkan si buuxda ugaga bogo xogta koox kasta oo uu Lionel Messi kaga hor yimid horyaalka La Liga ,kulamada uu kooxkasta ka hor yimid, goolasha uu kaga soo dhaliyay iyo waliba tirooyinka guud ee ka soo baxay.
Ma jirto koox hadda ka ciyaarta horyaalka La liga oo xidiga ree Argentina shabaqeeda ka ilaashatay iyada oo xili ciyaareed kasta saddexda kooxood ee ka soo baxay heerka labaad ay noqdaan kuwa Lionel Messi farta loogu fiigo ee la sheego in aanu wax goolal ah ka dhalin haddiina ayna ahayn kooxo uu hore uga soo dhaliyay oo heerka labaad ka soo laabtay.
sawirka si fiican looma arkoh khuburoooopy
messi cidi joojinmayso
qeybta sawirka iska hagaajiya
sawirka lamba arkayee wax ballaadhan buu noqonayaa oo aan la’arkeyne saxiibayaal